MUQDISHO, Soomaaliya - Guddiigii Aqalka Sare ee loo xil-saarey xalinta Khilaafka Gollaha Shacabka, ayaa joojiyay dhex-dhexaadintii uu wadey, kadib markii ay mira-dhal noqon waysay.
Go'aanka ayaa yimid kadib markii ay iscasileen saddex kamid ah xubnaha, oo kala ah Maxamud Axmed Maxamud (Mashruuc), Maxamed Amiin Sheekh Cismaan iyo Cabdi Xasan Cawaale [Qeybdiid].
Guddiga oo ka koobnaa 7 xubnood, oo uu gudoomiye u yahay Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa la magacaabay 17-kii bishan, si ay xal waara ugu helaan Khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya gudoonka Gollaha Shacabka iyo Xildhibaanada.
Xalay ayuu shaaciyay Guddiga inay fashilantay waan-waantii uu wadey, kadib markii kulamadii ay la qaateen dhinacyada isku haya Mooshinka Jawaari laga keenay ay noqdeen kuwa mira-dhali waayay, oo ismariwaaga jira uu yahay mid aysan xal u heli karin. Halkan ka akhri.
Garabka Jawaari ayaa sheegay xalay inuu burburay Mooshinka, kadib markii waqtigii loo qabtey ee 10-ka maalmood lagu horkeeni waayay Gollaha Shacabka, iyadoo waqtigaasi ku ekaa 28-ka Maarso.
Khilaafka taagan ayaan la ogeyn halka uu caga-dhigan doono, iyadoo Xildhibaanada Gollaha Shacabka labo u kala jabeen, kuwa difaacaya Jawaari iyo kuwa taageera ka helaya Xafiiska Ra'iisul Wasaare Khayre oo doonaya inay xilka ka qaadaan gudoomiyaha.
Taliyaha ayaa lagu eedeeyay inuu lugaha la galay Kiis culus kaasi oo soo dedejiyay in...